भुकम्प कस्का लागी र किन ? – प्रशान्त राज बाँनिया | Nepali Christians
भुकम्प कस्का लागी र किन ? – प्रशान्त राज बाँनिया
July 11, 2015 6:10 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
बैशाख १२ गते महाप्राकृतिक प्रकोप भुकम्प बास्तवमा एउटा इतिहास बनेर हामीलाई आज यस बेला सम्म पनि झस्काइरहे छ । सबै जाना आफनै सरमा थिए । खाने खाइरहेका थिए, घुम्ने घुमिरहेका थिए , रिसाउने रिसाइ रहेका थिए चर्च जाने चर्चमा थिए अनि मंदिर, गुम्बा मस्जित जानेहरु पनि आफनै सुरमा थिए । अचानक जमिन काम्न लाग्यो । बास्तवमा यो एउटा नरसंहारको रुपमा परिणत भयो र लगभग ८ हजार देखी ९ हजार सम्मको हाराहारीमा यसको खेलमा ज्यान गुमाउन विवस अनि हजारौ सँख्यामा घाइते अपाङग इत्यादि । बास्तवमा आज पुरै देश सोखमा डुवेको छ । इसाईहरु पनि त्यतिकै मात्रामा दुःखी छन् । तर भुकम्प गायो खास कस्को लागी ?
हामी बाइबलमा आफनो सारा मन र त्यो बाइबलामा भएको बचन दिनु हुने परमेश्वर प्रभु येशुलाई विश्वास गर्ने विश्वासी । बास्तवमा यो भयानक पिडा कस्को लागी थियो त ?..आज संसार एउटा घर जस्तै भएको छ । जाता ततै इन्टरनेट अनि भन्नु पर्दा फेसबुकले गर्दा कुनै पनि ठाउँमा घटना घटेको केही क्षेणमै सबै माज भाइरल भै हाल्छ । त्यसतै विच भुकम्प गएको केही समय बित्न नपाउदै मैले मेरा फेसबुकको इष्ट मित्रहरुले भुकम्प आएको आस्था र सम्प्रदायको विश्वास गर्नेहरुको लागी चेतावनी हो भन्ने कतबतक लेखेको पनि देखेँ । अलि नमज्जा लाग्यो । मत्ति १०ः२९, ३१ मा बर्णन भए जस्तै हाम्रो जिवनमा घट्ने प्रत्यक कुरा हामी विश्वास गर्नेहरुको निम्ति स्वर्गीय परमेश्वरको इच्छा विना हुदैन । यद्यपी हाम्रो टाउकोको प्रत्यक केशलाई एउटा एउटा नम्बर दिइएको छ । त्यसो भए केत हाम्रा लागी यो भुकम्प केबल एउटा प्राकृतिक प्रकोप वा अरु आस्थामा विश्वास गर्नेहरुको लागी चेतावनी ?
बास्तवमा हामीमा अफै ज्ञानको कमि छ । होशे ४ः६मा उल्लेख भएको बचन जस्तै हामी परमेश्वरका जन भएर पनि ज्ञानको कमिले गर्दा हामी नष्ठ हुन लागी सकेका छौँ । इसाई जगतमा भनेपनि हामी प्रत्यक दिन रित्तिदै गैरहेका छौँ । विश्व इसाई जगतमा भएका आमोल जागरण केबल हामीलाई एउटा कहानी लाग्दै गउको छ । आफनो इश्वरलाई प्रचार्न छोडेर अरुले मानिरहेको आस्थाको केन्द्रलाई हामी आफनो निशाना बनाइरहेका छौँ । अनि हाम्रो प्रत्यक दिनको सुस्केरा पनि प्रभु येशुलाई प्रचार गर्नु भन्दा अरु सम्प्रदायले मान्दै आएका आस्थाको केन्द्र विन्दुलाई सराप्ने कुरामा सुसेलि रहेका छौँ । लाग्छ यसरी प्रभुले हामीलाई स्वर्गमा इन्कार गर्नु हुन्छ भनेर धेरै इसाईहरु सोच्दछन । बास्तवमा यो सतप्रतिसत गलत छ जुन हामी सोचिरहेका छौँ । आजको यस समय सम्म आइपुग्दा नेपाली ख्रिष्टियन समाजमा धेरै राम्रा कामहरु पनि भए र धेरै नराम्रा कामहरु पनि भए । त्यो कुरालाई हामी मान्न तयार छैनौँ । बाइबलले हामीलाई हो लाइ हो होइनलाई होइन भन्नु त्यो भन्दा अरु दुष्टताबाट आउछ भनेर सिकाएको छ । त्सो भए के त हामी विचमा भएका यि धेरै कुराहरु होइन तर हाम्रा अगुवा वा सम्पुर्ण इसाई जगत नै किन होमा मुढे ढिप्पि गर्दै छ अनि धेरै ति संस्थागत गल्तिहरुलाई छोपछाप गरि फेरि नयाँ गल्ति गर्ने गर्दैछ र यसको सिको गर्ने हामी भै रहेका छौँ । सैतान कसरि बलियो र त्यसको स्थिती के हो भन्ने बारे बाइबलमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर पनि किन अरु आस्था र धर्म मान्ने मानिसहरुलाई इसाई जगतले शैतान भन्दा हामी किन मौन छौँ । ?
शैतान कसैको आशाको केन्द्र होइन त्यो एउटा सुन्दर स्वर्गदुत थियो जस्ले आफैलाई परमेश्वरको बराबरीमा राख्न खोज्यो र अन्तमा उ पृथ्वीमा खसालियो बास्तवमा यहिनै हो शैतान । हालको दिनमा यसले प्रत्यक मानिसलाई आफनो बसमा राख्न खोज्छ तर अरु कुनै अरु धर्मका नाम होइन शैतान । यो सम्पुर्ण इसाई जगतमा रहनु र प्रचारिनु पर्छ । हामीहरु मध्य धेरै यो कुरामा अन्जान छैनौ कि हालका दिनहरुमा इराक र पाकिस्तान सिरिया लिविया अफगानिस्तान आदिमा जो कसैले बम पडकाइदियो भने तेसको पहिलो कारक तत्व मुसल्मानहरुलाई पर्छ कतिपय घटनामा त मुस्लिमहरुलाई थाहानै हुदैन । पहिले मुसल्मान आस्था राख्ने तर पछि आफु खुशी काम गर्ने कारणले हामीले सजिलै मुसल्मानले भन्ने अनुमान गर्छौँ । कतै नेपाली इसाई जगतमा पनि त्यहि बाटो अपनाएको त छैन ? यदि, यदि यहिँ बाटोको लम्काइ हुने हो भने हिन्दु मुसल्मान र गुम्बामा भएका दुर्घटनाका कारण इसाईहरुलाई नआउला भन्न कसरि सकिन्छ र ?
यसमा घाम डुब्नु अधि धेरै बेल सोच्नु पर्छ विशेष गरि पास्टर र अगुवाहरुले । मत्ति १४ : २४–३० पदको बचन सायद हामीले बुझेर पनि यति सारो अबुझ भएका छौँ र ? यस संसारमा भएको प्रत्यक राम्रो – नराम्रो संग अन्तरसम्बन्घ छ । किनकी यो बचन विरुछ अरुलाई बदनाम गर्ने वा अरुलाई बदख्याई गर्दै हिडछौँ । प्रभु येशुले अन्तिम अवस्था सम्म सुसमाचार प्रचार गर भन्नु भयो तर कहिल्य पनि अरुको धर्मको विरोध गर वा बदख्याई गर भन्नु भएन । अरुको आस्था वा विश्वास माथि चोट पु¥याउनु सु समाचार होइन । हामी इसाई भएको नाताले केही सोच्नै पर्छ । ति सबै जस्को हामीले चित्त दुखायौँ उनिहरु संग माफि माग्नु पर्छ स्वर्गको साचो प्रत्यक विश्वासीको हातमा दिएर जाने प्रभुले भन्नु भयो जे तिमीहरुले पृथ्वीमा बाध्ने छौ त्यो तिमीहरुको निम्ति स्वर्गमा खोलिने छ । अब हामी आफैले सोचौ कि हामीके बाध्ने र के फुकाउने हो । हामीले अरुलाई गाली गरेर रिसराग बाधिरहेका छौँ भने याद गर्नुहोस त्यो स्वर्गमा बाधिने छ । अथवा तपाईले लोभ लालच वा घमण्ड वा अरुनै थोक बाधिरहनु भएको छ भने त्यो पनि स्वर्गमा बाधिने छ । यति ति सबै थोकबाट आफुलाई फुकाउन सक्नु भएन भने उत्पति १ः१– ३१ पद सम्म पढयो भने त्यहा विश्वास भन्ने कुरा आउनु भन्दा पहिलेनै सबै कुरा परमेश्वरले बनाउनु भयो । अब हामी भनौ को कहाँको सृष्टि हो । के उहाँलाई विश्वास गर्न मात्र ?? होइन उहालाई विश्वास गर्ने नगर्ने सबै उहाँको सृष्टि हो । त्यसकारण सबैमा प्रेम बाडौ त्यसैमा विश्वास झल्किन्छ अनि सुसमाचार पनि अनि हाम्रा छिमेकी पनि त्यहि हुन जस्लाई प्रभु येशुले आफुलाई झै प्रेम गर भनेर दोश्रो महान आज्ञा दिनु भएको छ । कुनै क्यान्सर रोगले थला परेको मान्छे जो धेरै दिन देखी ग्रसित हुन्छ सायद उस्को छेउमा जाँदा केही गन्ध आउला अब भन्नुस त्यो मानिसमा लागेको रोगलाई घृणा गर्ने कि त्यो व्यक्तिलाई नै छिछि दुरदुर गर्ने ? यो प्रश्न सम्पुर्ण इसाई जगतलाई जस्को कान छ त्यसले सुनोस ।।।
अन्त्यमा हामी प्रभु संंग कति दिन दुध र लिटो मात्र खाइरहने धेरै खँदिलो खाने कुरा त बाइबलमा प्रसस्तै छ । इसाई जगतके इतिहास सायद हामीले यति चाडै विर्सि सक्यौ र ? उत्पति देखी नै उहाँको बचन सुन्नेहरुलाई सतावट आउछ ४०० बर्ष इस्रायलिहरुको दासत्वको इतिहास, लाल समुन्द्र, ४० बर्ष उजाड स्थान मरुभुमिको यात्रा, अव्युवको बेदना, प्रभु येशुको १२ चेलाहरु मध्य धेरैको करुणामय हत्या , के यति चाडै यि कुराहरुलाई एउटा कथाको रुपमा लिन थाल्यौँ । बचन दुइधारे छ जुन आज पनि उतिकै सामर्थि छ परमेश्वरले उहाँको बचन सुन्ने र विश्वास गर्नेहरुलाई ताडना दिनुहुन्छ र प्रत्यकलाई धार्मीकताको तालिम दिनुहुन्छ ।
एउटा कुमालेले त जब सम्म भाडा बनाउन माटोलाई कुटदैन र सुरिलो स्वर निस्कदैन त्यो माटोलाई घाममा सुकाइ राखेको हुन्छ । परमेश्वरले हामीलाई त्यसै छोडनु हुन्छ भनेर हामी कसरी सोच्न सक्छौ र ? अब भन्नुस यो हिर्काय कस्को लागी हो ? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र उहाँमा कत्ति पनि अँध्यारो छैन । समग्रमा यो महाप्रलय विनासकारी भुकम्प हामी सम्पुर्ण इसाईहरुको लागी एउटा ताडनाको लागी वा हप्काईको लागी हो जस्मा हामीलाई उहाँले धार्मीकताको तालिम दिदैहुनुहुन्छ भनेर बुझनु भन्दा अरु बुझाई हाम्रो लागी धेरै कुरा गुम्न सक्छ । अन्तमा हाम्रो विश्वासलाई अरुको विरोध गरेर होइन उहाँको प्रेममा रहेर प्रकट गरौँ । यसले परमेश्वरको महिमा हुनेछ । सालोम
प्रशान्त राज बाँनिया
भुकम्प कस्का लागी र किन ? – प्रशान्त राज बाँनिया Reviewed by Admin on Jul 11 . बैशाख १२ गते महाप्राकृतिक प्रकोप भुकम्प बास्तवमा एउटा इतिहास बनेर हामीलाई आज यस बेला सम्म पनि झस्काइरहे छ । सबै जाना आफनै सरमा थिए । खाने खाइरहेका थिए, घुम्ने घ बैशाख १२ गते महाप्राकृतिक प्रकोप भुकम्प बास्तवमा एउटा इतिहास बनेर हामीलाई आज यस बेला सम्म पनि झस्काइरहे छ । सबै जाना आफनै सरमा थिए । खाने खाइरहेका थिए, घुम्ने घ Rating: 0
धादिङ इसाई समाजको सहकार्यमा ३५२ घर...म हराएको भेडा – गवाही...